''နှစ်ရှည်လများ ဒါရိုက်တာ အနေနဲ့ ရပ်တည်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို တကယ်ကို လေးစားတယ်'' သရုပ်ဆော? - Yangon Media Group
မေး- ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရိုက်ကူးမှုအပိုင်းမှာ ဘယ်လိုတွေစဉ်းစားပြီးတော့ ရိုက်ကူးရလဲ။
ဖြေ- တကယ်တမ်းကျတော့ အနုပညာဆိုတာက ကျွန်တော့် အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင် တကယ်ကိုမလွယ်ဘူး။ တကယ်ကိုခက်ခဲတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင် ဒီစိတ်နဲ့နေနေရတယ်။ ဇာတ်ကား ပေါ်မှာပဲ စိတ်နှစ်ထားပြီးတော့ ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။ ဇာတ်ကောင်တစ်ခုချင်းစီအပေါ်မှာ ဘယ်လိုလေးသွားရင် ကောင်းမလဲ။ ဘယ်လိုကင်မရာဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းမလဲ စသဖြင့် အသေးစိတ်ကအစ လုပ်ချင်တာကြောင့် တစ်ချိန်လုံး ညခေါင်း ထဲထည့်ထားရတယ်။ အဲဒါကြောင့် အနုပညာတစ်ခုဖန်တီးတယ်ဆိုတာက လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။
မေး- သရုပ်ဆောင်နဲ့ ဒါရိုက်တာ အလုပ်က ဘယ်အပိုင်းက တာဝန်ယူမှု ပိုများတယ်လို့ရော ထင်လဲ။
ဖြေ- ပြောရမယ်ဆိုရင် သရုပ်ဆောင်ဆိုတာက ဇာတ်ကားတစ်ကားမှာ ကိုယ်ပါဝင်ရမယ့်ကာရိုက်တာအရ သရုပ်ဆောင်ပိုင်း၊ အဝတ်အစားပိုင်း စသဖြင့်စဉ်းစားပြီးရင်ရပြီ။ ဒါရိုက်တာကကျ တော့ အရင်ဦးဆုံးတာဝန်ယူရတာက ပရိုဂျူဆာကို ဒီဇာတ်ကားကတော့ အဆင်ပြေမှာပါ စသဖြင့်တာဝန်ယူရတယ်။ နောက် သရုပ်ဆောင်တွေကို တာဝန်ယူရတယ်။ ညီမရေ၊ သမီးရေ ဒီဇာတ်ကားကတော့ နင်နဲ့လိုက်တယ်။ ဦးမင်းဦးက တာဝန်ယူတယ်စသဖြင့် တစ်ယောက်ချင်းစီကို တာဝန်ယူရတယ်။ ဇာတ်တစ်ခုလုံးပေါ်မှာလည်း တာဝန်ယူရတာဆိုတော့ ဒါရိုက်တာ အလုပ်က အရမ်းကိုတာဝန်ကြီးတယ်။
မေး- ဒါရိုက်တာအလုပ်လုပ်လာတဲ့နောက်ပိုင်း ဒါရိုက်တာတွေကို ကိုယ်ချင်းစာမိတာမျိုးရော ရှိလား။
ဖြေ- အဲဒါပြောတာ။ ကျွန်တော့်ထက်တစ်ရက်စောပြီးတော့ ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့သူတွေကိုလည်း လေးစားတယ်။ တကယ်ပြောတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါရိုက်တာအလုပ်ဆိုတာက ဇာတ်ကားတစ်ကားကို မရိုက်ခင်ရော၊ ရိုက်နေတဲ့အချိန်ရော၊ ရိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန် ရုံတင်တဲ့အချိန်ထိပါ တကယ်ကို မလွယ် တဲ့ ကိစ္စပါ။ အဲဒါကြောင့် တကယ်ကိုချီးကျူးပါတယ်။ နှစ်ရှည်လများ ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ရပ်တည်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို တကယ်ကိုလေးစားတယ်။
ပြည့်တန်ဆာ မိန်းကလေးများ၏်ဘဝကို ပုံဖော် ရိုက်ကူးထားသော 'ရွှေကြာ' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရုံတင??